सेल्टल्टबाट अभ्यास गर्नुहोस्: Google Analytics बाट स्टेटिक र डायनामिक आईपी ठेगाना कसरी हटाउने?
तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक वा बाह्य (तपाईका संगठन भित्र कर्मचारीहरू जस्तै कर्मचारीहरू) वा बाह्य (अवस्थित र सम्भावित ग्राहकहरूबाट) हुन सक्छ। जूलिया वशिना, सेल्टल्ट को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छिन् कि यदि तपाईं Google Analytics मा एक उपयोगी रिपोर्ट प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंलाई आन्तरिक ट्राफिक बाहिर निकाल्न आवश्यक छ। यो किनभने कम्पनी ट्राफिकले महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक मेट्रिक्स र पनि रूपान्तरित दरहरू परिवर्तन गर्न सक्छ।
Google Analytics बाट स्थिर आईपी को छोडेर
आन्तरिक ट्राफिक ट्र्याक गर्न Analytics बाट रोक्नको विभिन्न तरिकाहरू छन्। यदि तपाइँ एक स्थिर IP ठेगाना प्रयोग गर्नुहुन्छ, कम्पनी ट्राफिक को छोडेर यो एकदम सरल छ किनकि यसमा निम्न चरणहरू प्रयोग गरी IP ठेगाना फिल्टर सिर्जना गर्न समावेश गर्दछ:
(1 9) तपाईंको आईपी ठेगाना निर्धारण गर्नुहोस्: केवल google "मेरो आईपी ठेगाना" र गुगल ले तपाईंको सार्वजनिक आईपी ठेगाना देखाउनेछ। यो ठेगाना हो कि तपाई GA बाट बहिष्कृत गर्न चाहानुहुन्छ।
(1 9) IP ठेगानाको लागि नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस्: यो चरणमा, तपाइँलाई तपाईंको सार्वजनिक आईपी ठेगानाबाट ट्राफिक हटाउन नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ। यो कार्यलाई तपाइँलाई प्रशासक अधिकारहरू चाहिन्छ। तपाईंको GA खातामा लगइन गरे पछि, प्रशासक> सबै फिल्टर> नयाँ फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। फिल्टरको लागि एक नाम छान्नुहोस् र यसलाई थप्नुहोस्। अर्को, यो IP ठेगानाबाट ट्राफिक बहिष्कार गर्न ड्रप डाउन मेनु प्रयोग गर्नुहोस्। अन्तमा, वेबसाइट (हरू) को चयन गर्नुहोस् जुन तपाईले यो फिल्टरलाई लागू गर्नुभयो र परिवर्तनहरू बचत गर्नुहुन्छ।
(1 9) पुष्टि गर्नुहोस् कि आईपी ठेगाना निस्क्रिय गरिएको छ: वास्तविक-समय डेटा जाँच गर्नुहोस्, र यदि तपाईंले थप्नुभएको आईपी ठेगाना बहिष्करण गरिएको छ भने फिल्टरिंग सफल भयो।
बाट गतिशील आईपी ठेगाना बाहेक
तपाईंको कम्पनीमा एक सबनेट वा आईपी ठेगानाहरूको दायरा छ। वा तपाईंको यन्त्र धेरै स्थानहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यी अवस्थामा, GA बाट आन्तरिक ट्राफिक बाहिर निकाल्न अर्को दृष्टिकोणमा लिइन्छ, र यसमा निम्न चरणहरू समावेश छन्:
(1 9) या त बुकमार्कलेट प्रयोग गरेर कुकी सेट गर्नुहोस्। यदि आन्तरिक ट्राफिक5व्यक्ति वा कमको समूहबाट आउँछ भने, बुकमार्कलेट पर्याप्त छ। ठूलो समूहको लागि वा धेरै यन्त्रहरू फिल्टर गर्दै, त्यसपछि GMT विकल्पलाई मनपर्दो छ।
(1 9) GA मा एक अनुकूल आयाम सिर्जना गर्नुहोस् यदि एक भ्रमण आन्तरिक रूपमा उत्पन्न हुन्छ वा यो बाह्य प्रयोगकर्ताबाट हो। व्यवस्थापक खण्डमा, गुण स्तम्भ> कस्टम परिभाषाहरू> अनुकूलन आयामहरूमा जानुहोस्। अनुकूलन आयामको लागि मानको रूपमा "आन्तरिक ट्राफिक" सेट गर्नुहोस्।
(1 9) गतिशील आईपीहरूको लागि फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस्: प्रशासक सेक्शनमा जानुहोस् र दृश्य स्तम्भमा फिल्टरहरू चयन गर्नुहोस्। "+ नयाँ फिल्टर" क्लिक गर्नुहोस् (रातो बटन) र "इन्टरनेट ट्राफिक (डायनामिक आईपी) छोड्नुहोस्"। त्यसपछि फिल्टर प्रकारको रूपमा अनुकूलन चयन गर्नुहोस्। तपाईंले सिर्जना गरेको आयामको लागि खोज्नुहोस् र फिल्टर ढाँचाका लागि साँचो प्रविष्टि गर्नुहोस्।
(1 9) जोडेर फिल्टर सक्रिय गर्नुहोस् \_? तपाईंको साइटको यूआरएलको अन्त्यमा आन्तरिक। तपाईं फिल्टर सक्रियणका लागि बुकमार्कलेट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
(1 9) अन्तमा, फिल्टर सक्रिय छ भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईको साइटको कुनै पनि पृष्ठमा जानुहोस् वा तपाईलाई हालै ताजा गर्नुहोस्। त्यसपछि वास्तविक समय रिपोर्ट खोल्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि तपाईंको अन्तिम भ्रमण रिपोर्टमा देखाइएको छ। यदि यसले देखाउँदैन भने, तपाईंको फिल्टर सक्रिय छ।
तपाईंको व्यवसायमा आन्तरिक ट्राफिकमा धेरै गम्भीर असर हुन सक्छ। यो आवश्यक छ कि स्थिर र डायनामिक आईपी ठेगानाहरूका लागि फिल्टरहरू सक्रिय राखिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि कि Google Analytics ग्राहक व्यवहारमा उपयोगी अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।